EURO 2020 Knockout Stage Preview - Blog blog - jluis37.com
Euro 2020 na-aga nke ọma, anyị na-elekwa izu ịgba bọọlụ anya nke ọma. Otu-ogwugwu-nso nso a ka emechara, na ihe egwuregwu / knockout ga-amalite ito. Ọtụtụ mmadụ kwenyere na ọkwa a asọmpi a, na-asọ mpi egwuregwu niile. Dika ndi otu uwa na-acho ime ka obodo ha na ndi ozo nwee obi uto, oke nke egwuregwu ọ bụla na-abawanye na nrụgide. Mgbe otu egwuregwu nke nwere akụkụ nke ntụgharị na ntụgharị, ndị fọdụrụ ịlụ ọgụ ga-eji ihe ha niile egwu. Cristiano Ronaldo na ndị otu ya na-eche Euro ikpeazụ iji bulie iko a, France na-achọ ịchịkwa asọmpi ahụ. A ka nwere ọtụtụ ihe igwu egwu maka na ọkwa knockout nke Euro 2020, ma ka anyị banye amụma na ọkwa.
Amụma / Amụma
Ihe Kachasị Mma – France (Nsogbu 4.85)
Ọ bụ ihe nzuzo ọ bụla na France bụ ọkacha mmasị iji merie EURO 2020. Mgbe ị na-elele usoro ha, ị ga-ahụ ọtụtụ ndị mmeri ụwa, ndị mmeri, na ndị na-agba ọsọ egwuregwu. Igwe bụ oke maka “Les Bleus” na ndị na-akwado ha achọghị obere. Nwere ikike dị iche iche dịka Kylian Mbappe, Kingsley Coman, na Ngolo Kante, a na-etinye usoro a n’ọnọdụ ọ bụla. Ma ọ bụ nchekwa ị na-eche maka ya, ọgụ ahụ, ma ọ bụ etiti siri ike, enweghị adịghị ike ọ bụla ekpughere n’etiti ndị otu France. Egwuregwu mbụ ha ga-aga megide ndị otu Switzerland, na-atụ anya ka France merie nke a n’ike ma gawa n’ihu na ngwụcha. E nwere ọtụtụ ndị otu ọma hapụrụ na EURO 2020, mana France kacha mma ịkwatu ala ahụ. Chọọ maka otu egwuregwu bọọlụ kachasị nwee ọtụtụ ma nwee ọgụgụ isi iji mee nnukwu ọsọ na aha ahụ.
I Kwesịrị Considertụle… – Netherlands (Nsogbu 9.65)
Ndị otu Dutch bụ otu n’ime ihe omimi miri emi fọdụrụ na asọmpi ahụ. Site na ndị egwuregwu siri ike gburugburu niile nwere ike ịme ọtụtụ ihe n’ọtụtụ ọnọdụ, ha nwere ikike imeghari n’ọnọdụ ọ bụla. Giorginijo Wijnaldum ma nwee onye njikwa De Boer ga-ele anya iji mejuputa atụmatụ egwuregwu ha megide ndị otu knockout, ebe ọ na-arụ ọrụ na otu egwuregwu nke ọma. Ogologo oge Memphis Depay na co. jiri nwayọ wee gbakọtara, ha nwere ike ịbụ ike agụ. Ọ bụ ezie na ha na-efu arịlịka na Virgil Van Djik, Netherlands anọwo na-agbapụ na mwakpo ahụ, ma mee ka ntụgharị na midfield. Nkwenkwe ahụ dị mgbe nsonaazụ otu ahụ, ugbu a abịa na ogbugbu nke ndị egwuregwu ahụ setịpụrụ.
Otu ijuanya na Rough – Croatia (Nsogbu 63.0)
Ọ bụrụ na e nwere otu ndị agha na-enyo enyo nke ukwuu, m ga-asị na ọ bụ nke ndị Croatians. Otu egwuregwu jikọtara ọnụnọ nke ndị agha na-enweghị atụ, na ndị ntorobịa ole na ole, Croatia abanyewo n’okpuru radar asọmpi a. Agbanyeghị na ha egosighi egwuregwu kachasị mma, ha buliri elu na njedebe nke usoro ahụ. Luka Modric na-anọgide na-abụ ihe iyi egwu na egwu ahụ, ndị egwuregwu dịka Ante Rebic na Martin Skrinar niile nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ndị na-amanye ndị otu.
Na mkpokọta, ọnweghị ebe ka mma ịtọpụ ndị Euro karịa ndị ọzọ. Oge nke knockout na-aga n’ihu na-egosipụta nke kacha mma n’ụwa, ọ ga-akawanye mma mgbe emechara ọrụ ahụ!